Samachar Batika || News from Nepal » प्रवचन र रुपले मन्त्रमुग्ध पार्ने साध्वी जयाका को हुन् ? जान्नुहोस (१० फोटो सहीत)
काठमाडौ । साध्वी जया किशोरीको प्रवचन सुन्दा मन्त्रमुग्ध नहुने र रुपमा नल’ठ्ठिने सायदै काम मानिस होलान् । भारतमा मात्र हैन नेपालमा समेत उनका प्रवचनहरु सामाजिक सञ्जालहरुमा जो कोहीले सेयर गरिरहेका भेटिन्छन् । यसैले हामी उनै सबैको मनमा बसेकी साध्वी जया को हुन् ?
भन्ने जो कोहीको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै छौ । मात्र ७ बर्षको धेरै कलिलो उमेरमा अध्यात्मको मार्गमा जया सामेल हुन थालिन् । जया किशोरी मुख्यतया उनका कथाहरु र भजनहरुको लेखन र बाचनका लागी परिचित छिन् । साथै प्रवचनबाटपनि सबैलाई ल’ठ्याएकी एक पात्र हुन् । जया किशोरीका धेरै भजनहरू करोडौ पटक हेरिएका सूचिमा परेका छन् ।
जब हामी उनको भजनको बारेमा कुरा गर्छौं, त्यहाँ उनका धेरै प्रकारका भजनहरू छन् जसलाई प्रशंसा र मान्यता दिइन्छ। उनका प्रसिद्ध एल्बमका नामहरू शिव स्तोत्र, सुन्दरका’ण्ड, मेरे कान्हा की, श्याम थारो खाटू प्यार, श्याम की दिवानी की हुन्।
जानकारीका अनुसार, जया किशोरीले उदयपुर राजस्थानको नारायण सेवा ट्रस्टलाई उनको कथाहरूबाट आएको चन्दा दान गर्छिन्। यो ट्रस्टबाट असक्षमता भएका व्यक्तिहरूलाई मि’थ्याबाट दान गरेर सहयोग पुर्‍याइन्छ।
प्रकाशित मिति ३ चैत्र २०७७, मंगलवार ०३:५३